Wax ka ogaaw Lix xaqiiqo oo ku saabsan guriga Amitabh Bachchan (+Sawiro) – Filimside.net
Wax ka ogaaw Lix xaqiiqo oo ku saabsan guriga Amitabh Bachchan (+Sawiro)
Mega Star Amitabh Bachchan noloshiisa dhanka fanka waa mid wax badan laga ogyahay sidoo kalena lagu tilmaamo 100-ka sano ka badan fanka Hindiya jiro inuu yahay midkii ugu awooda badnaa uguna caansanaa ee Bollywood-ka soo maro.
Xaqiiqda koowaad: guriga uu daganyahay Amitabh Bchchan waa hadiyad uu siiyay Director Ramesh Sippy wuxuuna siiyay kadib markuu u sameeyay filimkii Satte Pe Satte.
Xaqiiqda labaad: guriga markii hore waxaa ku qornaa magaca Amitabh Bachchan walaalkiisa Ajitabh Bachchan naagta uu qabo ee Ramola Bachchan lkn sababo canshuur owgeed sanadkii 2006dii ayaa waxaa lagu qoray magaca xaaska Amitabh ee Jaya Bachchan.
Xaqiiqda sadaxaad: galabkasta oo axad ah Amitabh Bachchan wuxuu taageerayaashiisa kusoo dhaweeyaa gurigiisa taasoo hada caado ka noqotay si lamid ah qoyska oo dhan ayaa isku yimaado.
Xaqiiqda afaraad: guriga wuxuu ku fadhiyaa bad dhan 10,125 cag oo labo jibbaaran wuxuuna ka koobanyaha labo dabaq iyadoo darbiyada guriga lagu xardhay sawirada qoyska si guriga loogu qurxiyo.
Xaqiiqda shanaad: Filimka ugu horeeyay ee lagu duubay guriga Amitabh waa filimka waqtiga yar soconaayo Murabba oo uu Director Anurag Kashyap sameeyay kuna jiro filimka Bombay Talkies ee qaybaha kala duwan sheeko ahaan ka kooban. Laakiin gudaha aqalka Amitabh gabi ahaantiisa muuqaal ahaan filimkan laguma soo darin.
Xaqiiqda lixaad: Guriga Amitabh Bachchan wuxuu 1km kaliya u jiraa gurigii uu yaraantiisa daganaan jiray Prateeksha oo xasuus weyn uu Amitabh ka heesto madaama uu yahay halkii uu kusoo bar baaray.